कालापानी र लिपुलेकलाई लिएर नेपाली सेना एक्सनमा ! नेपाली भूभागको रक्षामा नचुक्ने – Gandaki Chhadke Nepal
भारतले सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्साबारे जंगीअड्डामा गहन छलफल भएको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ।
नेपाली भूभागलाई भारतको नक्सामा पारेको विषयमा विभिन्न दल, नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग र सर्वसाधारणबीच छलफल बढेपछि नेपाली सेनाले चासो देखाएको हो। प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले नेपाली भूभागको रक्षामा सुरक्षाकर्मी चुक्न नहुने भन्दै अन्य तीन सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल चलाएका हुन्।
नेपाली भूभागमा रहेको भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता पठाउने र अन्य सीमा पनि सुरक्षित गर्न कूटनीतिक एवं रणनीतिक तयारीमा पनि सेना अग्रसर भएको छ। लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा पाँच दशकदेखि भारतीय सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति रहेकामा कसरी फिर्ता पठाउने भन्ने विषयमा जंगीअड्डामा सुरक्षा प्रमुखबीच बहस भएको सैन्य उच्च स्रोतले बताएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल पनि जंगीअड्डा पुगेको समाचारमा बताइएको छ।
सिमाना अतिक्रमणमा जनता बोल्छन, सरकार किन बोदैन्नन!!हामीले वर्षाैंदेखि रोइकराइ गर्दै आएका छौं तर राज्यले सुनेन.. हेर्नुहोस् पुरा विवरण !
भीम रावलको सुरक्षामा खटाएका सशस्त्र प्रहरीका जवानमा कोरोना संक्रमण पुष्टि..हेर्नुहोस् ।